ट्वाइलेटमा मोबाइल लगेर के के गर्छन युवायुवतीहरू ? – – Nepali News Portal in Nepali
वि.सं २८ मंसिर २०७६, शनिबार
ट्वाइलेटमा मोबाइल लगेर के के गर्छन युवायुवतीहरू ?
वि.सं २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:०३
आजको जमानामा मोबाइल फोन विनाको जीवन अधुरो नै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । तर ट्वाइलेटमा मोबाइल लगेर के के गर्छन त युवायुवतीहरू ?
मोबाइल जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । खाली समय मिल्यो कि गोजीबाट मोबाइल फोन निकालेर इन्टरनेट खोलिहाल्छौँ हामी । सायद मानिसले मोबाइल फोन नचलाउने त्यस्तो कुनै ठाउँ नै छैन, चाहे त्यो ट्वाइलेट होस् वा अन्तरंग कार्य गरिरहेको शयन कक्ष ।
एक नयाँ तथ्यांक अनुसार, ४० प्रतिशत युवायुवतीहरुले आफ्नो अफिसको बाथरुममा समेत मोबाइल फोन चलाउँदछन् । सर्भेअनुसार अफिसको बाथरुमभित्र मोबाइल चलाउनेमध्ये ५५ प्रतिशतले फेसबुक चलाउने तथा ४३ प्रतिशतले ह्वाट्सएप चलाउने गर्छन् ।
ती मध्ये नै ४० प्रतिशतले ट्वाइलेट बसेर अनलाइनमा समाचार वा अन्य कुरा पढ्दछन् । १३ प्रतिशतले क्यान्डी क्रस खेल्नका लागि ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउँछन् भने ११ प्रतिशतले पोकेमोन गो खेल्दछन् ।
सर्भेक्षण अनुसार धेरै युवायुवतीले अफिसको बाथरुममा छिरिसकेपछि मोबाइल चलाउने धुनमा हात धुन पनि बिर्सिन्छन् ।
ह्युम रिसोर्स अनलाइनले ५ हजार मानिसमा गरेको विश्वव्यापी सर्भेक्षण अनुसार १६ प्रतिशत कर्मचारीले अफिसको ट्वाइलेट प्रयोग गरिसकेपछि हात नै धुँदैनन् । जबकि २५ प्रतिशतले केवल १० सेकेण्ड मात्र पानीमा हात चोप्दछन् ।
सर्भे अनुसार १२ प्रतिशत कर्मचारीले त अफिसको बाथरुमभित्रै खाने-पिउने गर्दछन् ।
कति धनि आराध्यदेव पशुपतिनाथ? पशुपतिनाथ मन्दिरमा ९ किलो ५ सय ८६ ग्राम सुन !
निर्णय विपरित भत्काइयो घर, पिडित भन्छन स्थानिय प्रशासनले कुरै सुनेन।
१३ औं सागको समापन आज, प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्ने
वि.सं २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ११:३२
बिरामीको पेटबाट निकालियो ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू !
वि.सं १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १४:१५
अर्बपति बिरालोकाे निधन, कसरी कमायाे बिरालोले अर्बौ ?
वि.सं ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १८:०१